पत्रपत्रिकाबाट Archives - Page 663 of 664 - inaruwaonline.com
नाकाबन्दीकाे असरः विलम्ब शुल्कमै अर्ब खर्च ?
१७ कात्तिक, काठमाडौं । तेस्रो मुलुकबाट आयातित कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाह र वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएका कारण व्यवसायीले अनुमानित एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विलम्ब शुल्कबापत तिर्नुपर्ने भएको छ। वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइसकेका सामानसमेत गन्तव्यमा पुर्‍याउन सरकारले चासो नदेखाएका कारण विलम्ब शुल्कको ठूलो बोझ आयातकर्तामाथि परेको छ।नेपाल फ्रेट फरवार्डर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार कन्टे...
अब सरकार आफैंले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने
काठमाडौं , १६ कात्तिक। सरकारले चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत इन्धन ल्याउने भएको छ । चीनबाट नेपाल इन्धन ल्याउने समझदारी गरी फर्केको टोलीले तेस्रो मुलुकबाट इन्धनसमेत चिनियाँ भूमिबाट ल्याउने सहमति गरेको एक अधिकारीले बताए । त्यसका लागि नेपालतर्फको सडक चौडा बनाउनुपर्ने सुझाव टोलीले दिने भएको छ । टोलीले भ्रमणको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । टोलीको नेतृत्व गरेका राजदूत महेस मास...
‘दशगजामा धर्ना अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत’
काठमाडौं ,१६ कात्तिक । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसले पारेको मानीवय संकट ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आन्दोलन चर्किएका तराईका जिल्लामा स्थलगत निरीक्षणपछि आयोगले शुक्रबार तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । प्रतिवेदनमा ‘आन्दोलनकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत दशगजा ...
Previous 1 … 662 663 664 Next